किरिन 990 ००: powerful जीको साथ सब भन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर आधिकारिक हो Androidsis
ईडर फेरेनो | | Huawei, IFA
किरीन 990। ० आधिकारिक रूपमा आईएफए २०१ 2019 मा प्रस्तुत गरिएको छ। केही हप्ता पहिले Huawei पुष्टि भयो तिनीहरू बर्लिनमा कार्यक्रम मा आफ्नो नयाँ प्रोसेसर प्रस्तुत गर्न जाँदै थिए। यो यसको नयाँ उच्च-प्रोसेसर हो, चिनियाँ निर्माताको नयाँ फोनमा उपस्थित हुन भनिन्छ जुन दुई हप्ता भन्दा कममा प्रस्तुत हुनेछ। यस प्रोसेसर को बारे मा केहि अफवाहहरु भएको छ, तर यो पहिले नै आधिकारिक छ।
चिनियाँ ब्रान्डले किरीन 990। ० प्रस्तुत गरिसक्यो, त्यसैले हामी सबै विवरणहरू जान्दछौं। हामी भेट्छौं ब्रान्डको सब भन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर भन्दा पहिले अहिले सम्म। थप, यस हप्ता अफवाहको रूपमा, यो ब्रान्डको पहिलो प्रोसेसर हो 5G नेटिभ एकीकृत छ।
1 5G र कृत्रिम बुद्धिमत्ता बलको रूपमा
2 लक्षण किरिन 990 ००
3 किरिन 990? ० कहिले जारी हुन्छ?
5G र कृत्रिम बुद्धिमत्ता बलको रूपमा
यो प्रोसेसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपस्थिति बाहेक, सबै महान शक्ति माथि गर्व गर्दछ। हुवावेले किरीन 990। ० को प्रस्तुतीकरणमा साझेदारी गरेको डाटा मध्ये एउटा हो प्रोसेसरसँग १०..10.300 अरब ट्रान्झिस्टरहरू छन् भित्र कम्पनीका अनुसार यसमा यसले ठूलो गतिमा योगदान पुर्‍याउँछ, २.2,3 जीबीपीएस डाउनलोड गति र १.२1,25 जीबीपीएस अपलोड गतिमा पुग्न सक्दछ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिपको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सामान्य जस्तो, NPU एक उपस्थिति बनाउँछ उहीमा। थप रूपमा, त्यहाँ स्पष्ट सुधारहरू भएको छ, कम्पनीले टिप्पणी गरेको छ कि कृत्रिम खुफिया अनुप्रयोगहरूमा यसको प्रोसेसर बजारमा यसको मुख्य प्रतिद्वन्द्वीहरू भन्दा तीन गुणा शक्तिशाली हुन्छ। हुवावेले दा भिन्सी नामको एनपीयू ल्याएको छ।
यो NPU जुन हामीले किरिन 990। ० मा पाउँछौं यो धेरै मांग गरिएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यहरूको लागि एक ठूलो प्रोसेसरको रूपमा बाहिर खडा छ। त्यो प्रोसेसरको थपमा, यससँग दोस्रो कृत्रिम खुफिया प्रोसेसर छ। यो दोस्रो प्रोसेसर कम शक्तिशाली छ, तर यो यसको कार्यक्षमताका लागि बाहिर खडा हुन्छ जब यो अपरेटि toको लागि आउँदछ। ब्रान्डले भन्छ कि यो विशेष गरी काम गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ जब यो दैनिक कार्यहरू गर्ने काम आउँदछ।
केहि दिनका लागि पहिले नै छलफल भैरहेको अर्को महान उपन्यास, कि किरिन 9905० स्वदेशी एकीकृत5जीको साथ आउँदछ। यो हालको फोनबाट परिवर्तन हो, जसले बाह्य G जी मोडेम प्रयोग गर्दछ। यस अवस्थामा मोडेम प्रोसेसरमा नै एकीकृत छ। यसले प्रोसेसरलाई अनुमति दिन्छ 5G NSA नेटवर्कहरू र 5G SA नेटवर्कहरूसँग उपयुक्त रहनुहोस्, 4G को अतिरिक्त, पक्कै पनि। यस तरिकाले, प्रयोगकर्ताहरूसँग उपलब्ध नेटवर्कहरूमा सबै समयमा पहुँच हुन्छ।
प्रोसेसरमा प्रयोग भएको G जी मोडेम यसको राम्रो प्रदर्शनको लागि बाहिर खडा छ। यो छिटो छ, हामी आफैंमा फेला पारे भन्दा छिटो छ Exynos 980 सामसु by्ग द्वारा यस हप्ता अनावरण गरिएको. कम ऊर्जा खपत हुनुको साथै, जुन एक आवश्यक पक्ष हो, किनकि G जी फोनमा बढी शक्ति खपत गर्नका लागि बाहिर देखिन्छ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि ब्रान्डले यस क्षेत्रमा उपायहरू लिन्छ। यद्यपि यो समर्थन वा G जी सँग एकीकरण प्रोसेसरको संस्करणको लागि हो। हामी किनिन5०० G जी र संस्करण5जी मात्र पाउँछौं। त्यहाँ दुई उच्च-अन्त प्रोसेसरहरू हुनेछ भन्ने हल्लालाई यकिन गरिएको छ.
लक्षण किरिन 990 ००
Huawei साझा गरेको छ यस प्रोसेसर को प्राविधिक विशेषताहरु तपाइँको घटना मा पूर्ण मा। त्यसैले हामीलाई थाहा छ कि हामी प्रदर्शनको सर्तमा हामीबाट के आशा गर्न सक्छौं। तिनीहरू मध्ये केही हप्तामा पहिले नै चुहावट गरिसकेका थिए, त्यसैले यो घटना प्रोसेसरको बारेमा निश्चित अफवाहहरूको पुष्टि गर्न काम गरेको छ। यसको विशिष्टताहरू निम्नानुसार छन्:
निर्माण प्रक्रिया: N एनएम + FinFet EUV
CPU: २ कोर्टेक्स ए c 2. कोर २.76 गीगाहर्ट्ज + २ कोर्टेक्स ए 2,86ores कोर २.2 गीगाह + Cor कोर्टेक्स ए c76 कोर १.2,36 Gh घज्डमा।
GPU: माली G76 १--कोर
नयाँ दा भिन्सी वास्तुकलाको साथ NPU
कनेक्टिविटी: प्रोसेसरमा निर्मित G जी मोडेम
डाउनलोड र अपलोड गति: २.2,3 जीबीपीएस डाउनलोड गति र १.२1,25 जीबीपीएस अपलोड गति
VoLTE सँग 4G को साथ डुअल सिम समर्थन।
फोटोहरु: नयाँ ISP फोटोग्राफी र भिडियो सुधार गर्न
किरिन 990? ० कहिले जारी हुन्छ?
हामीले भित्र लामो किरीन 990। ० को प्रयोग गर्ने फोनहरू हेर्न लामो समय पर्खनु पर्दैन। कम्पनी नै यो पहिले नै पुष्टि गरिसक्यो कि यो Huawei मेट 30 हुनेछ, जसको प्रस्तुति सेप्टेम्बर १ on मा म्युनिकमा आयोजित छ। त्यसैले दुई हप्तामा हामी प्रोसेसरको साथ यी पहिलो फोनहरू देख्नेछौं। के पत्ता लगाइएको छैन कि तिनीहरू 5G को साथ संस्करण वा 4G को साथ सामान्य प्रयोग गर्दछन्।
यी मोडेलहरू किरीन 990 ०० को प्रयोग गर्नका लागि मात्र हुनेछैनन्. Honor V30 बाट पनि यसको प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसरी घण्टा अघि अफवाह गरिएको थियो, यद्यपि यस समयमा त्यहाँ निर्माताबाट आधिकारिक पुष्टि छैन। थप रूपमा, यो संभवतः उच्च-अन्तमा जुन तिनीहरू फेब्रुअरी २०२० मा प्रस्तुत गर्दछ यस प्रोसेसर पनि छ। तर विवरणहरू महिनाहरूमा घोषणा गरिनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Huawei » किरीन 990: ०: हुआवेईको सब भन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर आधिकारिक हो